ရှီအာ အကီဒါများ မှ အရေးကြီး ကဏ္ဍ ၄ ခု အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန
ဇှနျ ၃, ၂၀၂၀ - ၁၁:၃၇ ညနေ News Code : 1043032 Source : ABNA Link:
စဂ်ျသာယေရှိုကိုရ်၊ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏မိုစ်သာအပ်ဝါဂျစ်စဂ်ျသာများ၊ဖန်ဆင်းရှင်အားစဂ်ျသာပြုမှုအတွက်ထင်ရှားသောသရုပ်ပြမှုများမှဖြစ်ပေသည်။လူသားအနေဖြင့်စဂ်ျသာပြုနေချိန်၌အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်မှအပအခြားအရာများကိုမေ့သွားပေမည်။မိမိကိုယ်တိုင်ကအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့်အနီးကပ်ဆုံးသူအဖြစ်မြင်တွေ့ရပေမည်။ထို့အတွက်ကြောင့် အလ္လာဟ်နှင့်ပိုမို၍နီးကပ်မှုကိုဖြစ်စေပါသည်။سير و سلوكနှင့်عرفان
الْقَهّاراللهُ مَعِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأطِلِ السُّجُودَ بَيْنَ يَدَىِ اللهِ الوَاحِدِ وَ إِذَا أرَدْتَ أنْ يَحْشُرَكَ
အာယတ်တော်၏အသုံးအနှုန်းအရအလ္လာဟ်ဆိုသည့်စကားလုံးသည်ဝါကျအစ၌သုံးထားသည်။ဤအတွက်ကြောင့်သီးသန့်အထူးဟုအဓိပ္ပါယ်ရ၏။ဆိုလိုသည်မှာမိုးကောင်းကင်နှင့်မြေပြင်အတွင်းရှိအရာများအားလုံးသည်သီးသန့်အထူးအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကိုသာလျှင်စဂ်ျသာပြုလုပ်ပါသည်။ထိုနည်းတူစွာစူရမ်အဲရ်ဖ်အာယတ်တော်အမှတ်၂၀၆( لَهُ يَسْجُدُون )ဟုထပ်မံပြီးစဂ်ျသာသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်တွက်သာလျှင်ဖြစ်ကြောင်းပြဆိုနေပါသည်။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အခြားနေရာ၌ဟဇရတ်သ်ယူစွတ်(ဖ) (အ.စ)၏အကိုများကဟဇရတ်သ်ယူစွတ်(ဖ)(အ.စ)အားစဂ်ျသာပြုခဲ့ကြောင်းလာရှိပေသည်။၎င်းတို့အားလုံးသည်တစ်ကြိမ်တည်းသာဟဇရတ်သ်ယူစွတ်(ဖ)(အ.စ) سُجَّداًوَخَرُّوا لَهُအားစဂ်ျသာပြုခဲ့ကြောင်းလာရှိပေသည်။စူရာယေယူစွတ်(ဖ)အာယတ်တော်၁၀၀
ဤအခန်း၌တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်အေမာမ်မာစူး(မ)(အ.စ)တို့မှမိန့်ကြားတော်မူသောဟဒီးစ်(၇)ပုဒ်အားတင်ပြထားပါသည်။ဟဒီးစ်ဆိုလိုချက်မှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သာလျှင်စဂ်ျသာပြုခံဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်အခြားသူများ၊ အရာဝတ္တုများအတွက်ပြုခွင့်မရှိဟုလာရှိပေသည်။
ကဲရ်ဗလာကမြေခဲကိုအခြားရှဟီးဒ်မြေ၏မြေခဲများထက်ပို၍အလေးပေးပါသည်။သို့သော်လည်းပဲကဲရ်ဗလာ၏မြေခဲနှင့်အခြားမြေခဲများအပေါ်၌သာအမြဲစဂ်ျသာပြုရမည်ဟုအစွဲမထားပေ။မက်စ်ဂျစ်၌ခင်းထားသောကျောက်ပေါ်၌လည်း စဂ်ျသာပြုနိုင်ပေသည်။ဥပမာ-ကအ်ဗာဝတ်ကျောင်းတော်နှင့် မက်စ်ဂျစ်ဒွလ်နဘီ(ဆွ)အတွင်းခင်းထားသောကျောက်ပြားများပေါ်တွင်အလွယ်တကူစဂ်ျသာပြုနိုင်ပေသည်။(ဂရုပြုပေးပါ။)
မည်သို့ဆိုစေရှီအာများထံ၌မြေခဲ၊မြေတုန်းများပေါ်စဂ်ျသာပြုနိုင်ကြောင်း ပြဆိုထားသောတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဟဒီးစ်တော်၊သာဝကတော်ကြီး များ၏လက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့သောဘဝသမိုင်းများသက်သေအမြောက်အများပြဆိုနိုင်ပါသည်။ဤအကြောင်းကိုရှေ့လျှောက်တင်ပြပါမည်။အေမာမ်များထံမှရီဝါယတ်တော်များကိုအမြန်ဆုံးတင်ပြပါမည်။
အေမာမ်ဂျာဖွရ်ဆွာဒစ်(အ.စ)၏သာဝကတော်တစ်ပါးဖြစ်သောပညာရှင် ဂျနာဘေဟရှမ်းဗင်ဟိုကမ်ကမည်သည့်အရာများအပေါ်စဂ်ျသာပြုနိုင်ပြီး၊ မည်သည့်အရာများအပေါ်စဂ်ျသာမပြုနိုင်ကြောင်းအေမာမ်ဂျာဖွရ်ဆွာဒစ်(အ.စ)ထံမေးမြန်းခဲ့ရာအေမာမ်(အ.စ)အနေဖြင့်ဤကဲ့သို့အဖြေပေးလေ၏။
مَا أُكِلَ أوْ لُبِسَالسُّجُودُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ عَلَى الاأُرْضِ أَوْ مَا أنْبَتَتْ الأرْضُ إِلاَّ “မြေကြီးအပေါ်မှအပအခြားအရာများအပေါ်စဂ်ျသာပြုပိုင်ခွင့်မရှိပေ။သို့သော်စားစရာ၊ ဝတ်စရာ၊ မဆုတ်သောမြေကြီးမှထွက်သောအရာများအပေါ်၌လည်းစဂ်ျသာပြုနိုင်ပေသည်။”
أنْ يَكُونَعَلَى مَا يُؤْكَلُ وَ يُلْبَسُلاِأُنَّ السُّجُودَ هُوَ الْخُضُوعُ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ يَنْبَغِى
فَلاَ يَنْبَغِىمَا يَأْكُلُونَ وَ يَلْبَسُونَ وَ السَّاجِدُ فِى سُجُودِهِ فِى عِبَادَةِ اللهِلاِأُنَّ أبْنَاءَ الدُّنْيَا عَبِيدُ
“အကြောင်းသည်ကားစဂ်ျသာသည်ကျိုးနွံ၊နှိမ်ချမှု၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍စားသောက်စရာများ၊ဝတ်ဆင်စရာများအပေါ်စဂ်ျသာပြုခြင်းသည်မသင့်လျော်ချေ။အကြောင်းသည်ကားလောကီလိုက်စားသူများသည်အစားအသောက်များ၊အဝတ်အထည်များမက်မောနှစ်မြို့သောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။စဂ်ျသာပြုခြင်းသည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အားအေဗာဒသ်ပြုခြင်းဖြစ်ပေ သည်။သို့ဖြစ်ပါ၍နဖူးအားလောကီလိုက်စားသူများ၊တပ်မက်သော၊ ဂုဏ်ယူသောအရာများအပေါ်တင်ရန်စဂ်ျသာမပြုသင့်ချေ။” ဆက်လက်မိန့်တော်မူသည်မှာ-
لِلتَّوَاضُعِ وَالْخُضُوعِ لِلّهِ عَزَّ وَ جَلَّوَالسُّجُودُ عَلَى الاأُرْضِ أَفْضَلُ لاِأُنَّهُ أبْلَغُ
طهوراً; سرتاسر زمين براى من مسجد استجعلت لى الارض مسجداً وترابها
သို့ဖြစ်ပါ၍ဤဟဒီးစ်တော်၌မက်စ်ဂျစ်(ဗလီ)၏ဆိုလိုသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာ- စဂ်ျသာဂါဖြစ်ကြောင်း၊စဂ်ျသာဂါလည်းပဲ(သရ်ယမွမ်)လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ရမည်ဆိုသော အချက်အားသံသယမရှိပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
لانظر إلى أثر ذلك فى جبهته و ارنبتهسجد رسول الله فى يوم مطير حتّى أنّى
زمين سجده مى كرد و اثر آن بر پيشانى ورسول خدا را در يك روز بارانى ديدم كه بر
“ကျွန်တော်(အဗူဟိုရိုင်းရ်)အနေဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားမိုးရွာသော တစ်နေ့၌ စဂ်ျသာပြုနေသည်ကို၎င်း၊ ပြီးနောက် ကိုယ်တော်၏နဖူးတော်နှင့် နှာခေါင်းတော်ပေါ်၌စဂ်ျသာပြုထားသောအရိပ်လက္ခဏာများကို၎င်းတွေ့ခဲ့ရပေသည်။”
(صلى الله عليه وآله)اكرمما رأيت رسول الله متقياً وجهه بشىء; من هرگز نديدم پيامبر
الخُمرة فيسجد; پيامبر بر قطعه حصيرى نماز مى خواندو رسول الله يصلى على
မက်စ်ဂျစ်ဒွလ်နဘီ(ဆွ)၌ ကျွန်တော်(အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာမကာ ရှာရဇီး) သည်ဖျာငယ်လေးအပေါ် နမာဇ်ဖတ်နေစဉ် အစွန်းရောက်တစ်ယူသန် ဝါဟာဘီပညာရှင်တစ်ယောက်လာပြီး၊ဖျာငယ်လေးကိုလုယူပြီး၊စိတ်ဆိုးမာန်တက် ပြီးပစ်ပေါက်ကာ“ဗေဒ်အတ်”ဟုပြောခဲ့သောဖြစ်ရပ်ကိုမမေ့သေးပေ။
فيأخذ أحدنا الحصباء فى يده فإذا بردكنّا مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) فى شدّة الحرّ
على غير الأرض حتّى فى السفينة وكان لا يرخص فى السجود
“သူ(အဗ်ဒွလ္လာဟ်အဗ်နေမစအူးဒ်)သည်မည်သူကိုမျှမြေကြီးပေါ်မှလွဲ၍စဂ်ျသာပြုခွင့်မပေးချေ။နောက်ဆုံးရေလမ်း၊ခရီးသွားရချိန်၌ပင်မိမိနှင့်အတူစဂ်ျသာပြုရန် အရာ(မြေခဲ(သို့)ကျောက်စရစ်ခဲ)အားသဘောင်္ပေါ်ယူဆောင်သွားပြီး ၎င်းအပေါ်စဂ်ျသာပြုလေ၏။
 اسجدابعث إلىّ بلوح من أحجار المروة عليه
عبدالعزيز لا يكتفى بالخمرة بل يضع عليها التراب و يسجد عليهكان عمر بن
ပို၍ကောင်းသည်ကား- بُعِثْتُ إلَى الشَّرِيعَةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ အတိုင်းနှင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏(၅)ကြိမ်နမာဇ်ကို(၅)ချိန်ဖတ်လျှင်ပို၍မြင့်မြတ်သည်ဟုဆိုထားသည်ကိုအရေးပေးပြီးဟဒီးစ်ကိုလည်းလိုက်နာရာဖြစ်အောင်၊လူထုအား(၅)ကြိမ်နမာဇ်ကို(၃)ချိန်အတွင်းဖတ်ပိုင်ခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပေသည်။
العصر فيكون هذا الوقت مشتركاً بين الصلوتين و أن يكونالزوال وقتاً للظهر و والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركاً أيضاً بين هاتين الصلوتين فهذأول المغرب وقتاً للمغرب
အဗ်နေကစီး(ကျော်ကြားသောစွန်နီပညာရှင်)အနေဖြင့်မိမိ၏သဖ်စီးစာအုပ်«تفسير القران العظيم»၌ရေးသားဖော်ပြထားသည်မှာ-
အာယတ်တော်၌ أرجلكم ဆိုသည့်စကားလုံးကိုသုံးစွဲထားပြီးرؤوسكمဆိုသည့်စားလုံးအပေါ်၌အာရဘီသဒ္ဒါအရعطفပြုလုပ်ထားပါသည်သို့ဖြစ်ပါ၍أرجلكم အား أَرْجُلَكُمလုပ်၍ဖတ်ဖတ်أرجلِكمလုပ်၍ဖတ်ဖတ်အာရဘီသဒ္ဒါအရ“မဆာ”ဟုသာအဓိပ္ပါယ်ထွက်မှာဖြစ်ပြီးဆေးကြောခြင်းဟုအဓိပ္ပါယ်ထွက်မည်မဟုတ်ချေ။
၁။အဗ်နေဟဇ်မ်၏ الأحكام فى أصول الأحكاစာအုပ်အရတမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ)စွန္နတ်နှင့် ဟဒီးစ်တော်များကိုကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့်အထက်ပါအာယတ်တော်အားمنسوخ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးဟုဆိုထား၏။
၂။ဤကဲ့သို့သောအခြားစာအုပ်တစ်အုပ်ဂျစာစ်၏أحكام القرآنစာအုပ်အတွဲ(၂)စာမျက်နှာ(၄၃၄)တွင်ဝိုဇူ၏အာယတ်တော်သည်مجمل(အဖြေမရေမရာ)ဖြစ်ပါသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်“အဟ်သေရားသ်”ပြုသည့်အနေဖြင့်ခြေမျက်စိအထိဆေးကြောရပေမည်။ထိုမှသာလျှင်ဆေးကြောခြင်းနှင့် “မဆာ”ပြုခြင်းနှစ်ခုစလုံးအထမြောက်သွားမည်ဖြစ်ပေသည်ဟုဆိုထား၏။
၃။ဖခ်ရေရာဇီးအနေဖြင့်လည်း“အကယ်၍أرجلِكمဟုဖတ်ပြီးرؤوسكمအပေါ် عطفလုပ်ပါက“မဆာ”ပြုလုပ်ဖို့အဓိပ္ပါယ်ထွက်၏။သို့သော်ဤနေရာ၌ “မဆာ”ဆိုသည်မှာပွတ်သပ်ခြင်းမဟုတ်ပဲခြေမျက်စိအထိဆေးကြောရာ၌
النبى(صلى الله عليه وآله) و أنا احرمهما متعتان كانتا محللتان فى زمن
و اعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏နောက်ဆုံးစူရဟ်အဖြစ်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ကိုယ်တော်မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)အားပေးထားသည့်အမိန့်“မိမိ၏မျက်နှာ၊နှင့်လက်များကိုတစ်တောင်ဆစ်အထိဆေးကြောပါလေ။ဦးခေါင်းနှင့်ခြေ (မျက်စိအထိ)ကို “မဆာ”ပြုလုပ်ပါဟုဆိုထားသည်ကိုမပြည့်စုံ၊မဖူလုံသောလူသားဥာဏ်၊စလ်စဖေသုံးပြီးဆန့်ကျင်ကာအကြောင်းပြချက်များထုတ်ခြင်းဖြင့်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်များနှင့်မအပ်စပ်မှုများကိုထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ပါသလော!
မှန်လှပေသည်။သဖ်စီးပေရိန်း(تفسير به رأى )နှင့်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားရှိလျက်အဂ်ျသေဟဒ်ပြုခြင်း(اجتهاد در مقابل نص)ဖြင့်ကြီးမားသောဒုက္ခနှစ်ခုကိုဖြစ်စေပါသည်။အချို့နေရာများ၌အစ္စလာမ်ဥပဒေကိုဖျက်ဆီးဖြစ်ကြသည်။
الخفّين ; هرگاه دو پاى من قطع شود براىلئن تقطع قدماى أحبّ إلىّ من أن امسح على
 روى كفش ها كنممن بهتر از آن است كه (هنگام وضو) مسح بر
مَسْحُ الخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الحَجِّثَلاَثَةٌ لاَ اتَّقِى فِيهِنَّ أحَداً شُرْبُ المُسْكِرِ، وَ
၁။ـ صحيح بخارى
၂။ـ مسند احمد
၃။سنن ابن ماجه
၁။(اميرمؤمنان على(عليه السلام )
၃။انس بن مالك
၄။عثمان بن عفان
၅။بسر بن سعيد
الْقَدَمَيْنِ أحَقُّ بِالْمَسْحِعَنْ عَلِى بْنِ أبِى طَالِب(عليه السلام) قَالَ : كُنْتُ أرى أنَّ بَاطِنَ
اللهِ(صلى الله عليه وآله) يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَامِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ
عن ابى مطر قال: بينما نحن جلوس مع على(عليه السلام) فى المسجد جاءرجل إلى
على(عليه السلام) و قال: أرنى وضوء رسول الله(صلى الله عليه وآله) فدعا
اتيتنى بكوز من ماء، فغسل يده و وجهه ثلاثاً فأدخل بعض أصابعه فى فيه و :قنبر فقال
ثلاثاً و غسل ذارعيه ثلاثاً و مسح رأسه واحدة... و رجليه إلى الكعبيناستنشق
عن بسر بن سعيد قال: أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمضواستنشق ثمّ غسل
ثلاثاً و يديه ثلاثاً ثلاثاً ثمّ مسح برأسه و رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثمّ قال: رأيتوجهه
رسول الله(صلى الله عليه وآله)هكذا توضّأ، يا هؤلاء أكذلك؟ قالوا: نعم، لنفر
أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) عندهمن
ဤဟဒီးစ်တော်ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်အွစ်မန်းတစ်ဦးထဲမဟုတ်ဘဲ၊အခြား သာဝကတော်များပါတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ခြေတော်များကို“မဆာ”ပြုခဲ့လုပ်ကြောင်းဟုသောအချက်ပင်ဖြစ်၏။(၃)ကြိမ်၊(၃)ခါဦးခေါင်းနှင့်ခြေများကို မဆာပြုခြင်းသည်အချို့သာဝကများ၏အမြင်၌မွတ်စ်သာဟပ်ဖြစ်နိုင်ပြီး(သို့)ရဝီးအနေဖြင့်မေ့မှားသွားခြင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။
صلوة لأحدعن رفاعة بن رافع أنّه سمع رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقول: أنّه لا تتمّ
المرفقينحتّى يسبغ الوضوء، كما أمره الله عزّ و جلّ يغسل وجهه و يديه إلى
و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين
عن ابى مالك الأشعرى أنّه قال لقومه: اجتمعوا اصلّى بكم صلوة رسول الله
الله عليه وآله) فلمّا اجتمعوا قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلاّ ابن اختصلى)
لنا، قال: ابن اخت القوم منهم، فدعا بجفنة فيها ماء فتوضّأ و مضمض و استنشق و
وجهه ثلاثاً و ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً و مسح برأسه و ظهر قدميه ثمّ صلّى بهمغسل
اما ترضى أن تكون لى بمنزلة هارون من موسى
فليتبوء مقعده من النار من كذب علىّ
“မည်သူမဆိုလိမ်လည်ပါက၊၎င်းအတွက်နေရာသည်ကားဂျဟန္နမ်ဖြစ်ချေသည်”ဟုဆိုရာ၊၎င်းအနေဖြင့်အဖြေပြန်ပေးသည်မှာ- တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)မိန့်တော်မူသည်မှာ- ... من كذب علىّ
ကူရ်သိုဘီးတစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲဤကဲ့သို့သော်ဟဒီးစ်တော်များကိုတင်ပြထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ၊အခြားစွန်နီပညာရှင်များအနေဖြင့်လည်းတင်ပြထားပါသည်။(ပိုမို၍ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာနိုင်ရန်တန်ဖိုးကြီးမားသော “အလ်ဂဒီးရ်”စာအုပ်အတွဲ(၅)ရှိ وضّاعين كذّابين وဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်ကိုလေ့လာသင့်ပေသည်။)
သာဓကအားဖြင့်سمرة بن جندبဖြစ်ပေသည်။မအ်ဝေယာဆီမှဒီးရ်ဟမ်လေးသိန်းယူပြီး၊ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အားပုတ်ခတ်၍လုပ်ကြံခဲ့သူ (အဗ်နေမိုလ်ဂျင်(လ.န)အားချီးကျူးသောဟဒီးစ်အတုပြုလုပ်ကာအာယတ်တော်- ...مَرْضَاةِ اللهِنَفْسَهُ ابْتِغَاءَمَنْ يَشْرِيوَمِنَ النَّاسِစူရာဟ်ဘကရဟ်
အာယတ်အမှတ် (၂၀၇)သည်အဗ်နေမိုလ်ဂျင်(လ.န)အတွက်ကျရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး၊...الدُّنْيَاالْحَيَاةِقَوْلُهُ فِىمَنْ يُعْجِبُكَوَمِنَ النَّاسِစူရာဟ်ဘကရဟ်အာယတ်အမှတ်(၂၀၄)သည် ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အတွက်ကျရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုထား၏။الأكاذيبمن هذهباللهنعوذ
ဤအတွက်ကြောင့် မောင်လာအလီ(အ.စ)အားဆန့်ကျင်သောအနေဖြင့် ဝိုဇူ၌ခြေများကိုဆေးကြောရမည်ဟု ရီဝါယတ်အတုပြုလုပ်ထားခြင်းသည် အံ့ဩဖို့မကောင်းပေ။
الفقه على المذاهب الاربعهစာအုပ်၌အခက်အခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ရချိန်တွင်ဖိနပ်အပေါ်မဆာလုပ်ရန်ဝါဂျစ်(ပ)ဖြစ်ပြီး၊ကျန်အချိန်များ၌ခွင့်ပြုထား၏။သို့သော်ခြေများကိုဆေးကြောခြင်းကိုပိုမိုမြင့်မြတ်သည်ဟုဆိုထား၏။
شكر خدا ဟနဖီများအနေဖြင့်ဤကဲ့သို့လက်ခံယုံကြည်ထားကြပေသည်။
ပို၍စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုသည်ကားစာရေးဆရာအနေဖြင့်ဖိနပ်အပေါ်မဆာပက်သက်၍အကျယ်တဝင့်မည်ကဲ့သို့သောဖိနပ်များဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊မဆာ၏အတိုင်းအတာ၊အချိန်(ဘယ်နှစ်ရက်)သုံးရပါသနည်း ? ဖိနပ်အပေါ်မဆာလုပ်လျှင်မွတ်စ်သဟပ်များ၊မကရူများ၊မဆာကိုဖျက်ပေးသောအရာအချက်များ၊စည်းကမ်းချက်များ၊ လုံးဝသရေဖြစ်ရမည်။ (သို့)သရေမဟုတ်ပါကဖူလုံ၊မလုံ၊အဖွင့်ပါသောဖိနပ်များ၊အဖွင့်မပါသောဖိနပ်များနှင့်ပက်သက်သောအဟ်ကမ်များစသည်ဖြင့်-အကျယ်တဝင့်ရေးသားထားပါသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်(ابى الورد)မှအေမာမ်မိုဟမ္မဒ်ဘာကဲရ်(အ.စ) အားလျောက်ထားသည့်အဘူဇဇ်(ဘ)ရန်းပြောသည်မှာကျွန်ုပ်(အဘူဇဇ် (ဘ)ရန်း)သည်မောင်လာအလီ(အ.စ)ရေကိုပစ်ချပြီးဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
;رِجْلَيْكَعَلَىتُخَافُثَلْجتَقِيَّةً أوْمِنْ عَدُوٍّلاَ إلاَّ:فَقَالَرُخْصَةٌ؟
ကျွန်တော်( ابى الورد )အနေဖြင့်ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခွင့်ရှိပါသလား? ဟုလျောက်ထားရာ၊အဖြေပေးတော်မူသည်မှာ-မရှိ။သို့သော်ရန်သူများအကြားရှိ၍နေချိန်၊သကိုင်ယာ၊ပြုရချိန်နှင့်မြေပြင်ပေါ်ရေခဲများပြန့်နေသဖြင့်ခြေထောက်အတွက်အခက်အခဲ၊ဖြစ်မည်စိုးရိမ်နေချိန်၌ခွင့်ရှိပေသည်။
တတိယ။ ။အေမာမ်မိုဟမ္မဒ်ဘာကဲရ်(အ.စ)အနေဖြင့်လည်းဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခြင်းနှင့်ပက်သက်ပြီးရီဝါယတ်တော်အားမိန့်တော်မူသည်မှာလည်းအရေးကြီးသည့်အချိန်၊ဥပမာအရမ်းအေးပြီး၊ခြေများကိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သောအချိန်ကိုမိန့်ထားပေသည်။ (သကိုင်ယာအချိန်ဖြစ်ပါသည်။)
من لا يحضره الفقيه၌ဟဒီးစ်တော်တစ်ပုဒ်အားအမီးရွလ်မိုမေနီးမောင်လာအလီ(အ.စ)ဆီမှ ဆင့်ပြန်ထားပါသည်။
بِسُنَّتِنَا وَلْيَسْتَنَّفَلْيَقْتَدِ بِنَامِنْ شِيعَتِنَاكَانَفَمَنْعَلَى الخُفَّيْنِلاَ نَمْسَحُ... إنّا اَهْلُ بَيْت
صَلاَتُهُ غَيْرُيَتُمَّ وَوُضُوئُهُ لَمْكِتَابَهُ وَرَسُولَهُ وَخَالَفَ اللهَ وَالخُفَّيْنِ فَقَدْمَسَحَ عَلَىمَنْ
ဖိနပ်အပေါ် မဆာမပြုဖို့ မောင်လာအလီ(အ.စ)၏ ရီဝါယတ်တော်ကို ဂရုပြုပြီးနောက် ဖခ်ရေရာဇီးဟ်၏ ဗစ်မေလ္လာဟ်ကို တိုးညှင်းစွာဖတ်ရမည်လား၊ အသံကျယ်ဖြင့်ဖတ်ရမည်လားဆိုသည့်ကိစ္စဘက်အာရုံရောက်မိပါသည်။ရေးသားထားသည်မှာ-အုပ်စုတစ်စုသည်ဗစ်မေလ္လာဟ်ကိုတိုးတိုးဖတ်ရမည်ဟုဆိုပြီးအမီးရွလ်မိုမေနီးမောင်လာအလီ(အ.စ)သည်ကျယ်ကျယ်ဖတ်ရမည်ဟုဆိုထား၏။
نفسه فى دينه وبالعروة الوثقىفقد استمسكلدينهمن اتخذ علياً إماماً
မည်သူမဆိုမိမိသာသနာ၌အလီ(အ.စ)ကိုခေါင်းဆောင်အေမာမ်အဖြစ်သတ်မှတ် ပါက မိမိ၏နဖ်စ်(စိတ်)နှင့်ဘာသာကို လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာသို့ အပ်နှံခြင်းနှင့် တူပေသည်။
الْخُفَّيْنِبِالْوُضُوءِ عَلَىأَنَّهُ لاَ بَأْسَ
دعا بماء فبال قائماً ثمّسباطة قومإلى (إلى عليه وآلهصلى الله)مشى رسول الله
على خفّيهو مسحبماء فتوضأفجئته
ကျွန်တော်အနေဖြင့်မေးခွန်းမေးစရာတစ်ခုသည်ကား-ရိုးရိုးသာမန်သိက္ခာရှိသူ၊အရေးပါသူတစ်ယောက်အနေဖြင့်ဤကဲ့သို့သောသိက္ခာမဲ့သောအလုပ်၊(အမှိုက်ပုံးဘေး၌အပေါ့သွားခြင်း)လုပ်နိုင်ပါသလား?(သို့သော်ကမ္ဘာသိက္ခာအရှိဆုံးလူသားဖြစ်သည့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အား စော်ကားထားကြသည်။ မိုက်ရိုင်းလေစွ! (ဘာသာပြန်ဆိုသူ)
على خفافنايأمرنا بالمسح(صلى الله عليه وآله)مع رسول اللهكنّا إذا سافرنا
ကျော်ကြားသောဟဒီးစ်ပါရဂူဘိုင်ဟကီးသည်မိမိစာအုပ်السنن الكبرىစိုနန်နိုလ်ကဘ်ရီကျမ်း၌صلى الله عليه وآلهعليه باب الخف الذى مسح رسول الله၏ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားထားသည်။ ၎င်းခေါင်းစဉ် အောက်၌ ဖေါ်ပြထားသောရီဝါယတ်တော်များအရသိရသည်မှာ-မိုဟဂျေးရီး(န) နှင့်အန်ဆာတို့အနေဖြင့်ဖိနပ်အဖွင့်များ၊ အများစု သုံးစွဲကြောင်း သိရပေ သည်။(ဆိုလိုသည်မှာရှေ့ပိတ်နောက်ဖွင့်ဖိနပ်များကိုဆိုလိုသည်။)
 مشققةمخرقةو الأنصارالمهاجرين خفافو كانت كذلك
ဤအတွက်ကြောင့်၎င်းတို့အနေဖြင့်မိမိတို့ဖိနပ်များမချွတ်ဘဲမဆာလုပ်ခဲ့သည်မှာ ဖြစ်နိုင်ချေများပေသည်။စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုသည်မှာ-ဖိနပ်အပေါ် မဆာပြုရမည်ဟုဟဒီးစ်တော်များကိုတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ထံမှတင်ပြသောသာဝကများတစ်ခါတစ်ရံသာတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၌ခစားကြပြီး၊ ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အနေဖြင့်အမြဲခစားနေသူဖြစ်ပေသည်။
الخفّينعلى أنْ أمسحإلىّ منقدماى أحبّلئن تقطع
၁။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်(စူရဟ်မအေဒါ၊အာယတ်၆)အရဝိုဇူပြုရာ၌တာဝန်အစစ်သည်ခြေများအပေါ်(ခြေမျက်စိအထိ)မဆာပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အဟ်လေဘိုက် (အ.စ)နောက်လိုက်ဓမ္မသတ်ပညာရှင်များအားလုံး၏ဖသ်ဝါများအားလုံးသည်လည်း ဤအတိုင်းပင်ဖြစ်ပေသည်။
၂။စွန်နီဓမ္မသတ်ပညာရှင်များအားလုံးနီးပါးအနေဖြင့်ခြေများအား ဆေးကြောခြင်း ကို တာဝန်အစစ်အဖြစ်လက်ခံပြီးအများစုသည်ဖိနပ်အပေါ်မဆာပြုခြင်းကို ခွင့်ပြု ထားပြီး၊အချို့ကအရေးပေါ်အချိန်၌ခွင့်ပြုထားပေသည်။
တစ်ချို့အချိန်တိုင်းအတွက်ခွင့်ပေးထားသည်ဟုပြောပြထားပြီး၊အချို့ကအရေးပေါ် အချိန်၌ခွင့်ပေးထားသည်ဟုဆို၏။အရေးပေါ်အချိန်အားလမ်းခရီး၌ (၃)ရက် မိမိဒေသ၌(၁)ရက်ဟုသတ်မှတ်ထား၏။
ခြေများကိုမဆာပြုရမည့်အမိန့်(၎င်းတို့(စွန်နီ)အနေဖြင့်မိမိတို့အကီသာအရခြေများကိုဆေးကြောခြင်းအမိန့်ကိုအမိန့်အစစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဖိနပ်အပေါ် မဆာပြု ခြင်း ကိုအရေးပေါ်အချိန်၊အခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်ရချိန်၊ဥပမာ-စစ်ပွဲအတွင်း စစ်ဗိုလ်ဖိနပ်များစီးထားရ၊ချွတ်၍အခက်အခဲရှိနေချိန်၌ပြုလုပ်ရပေမည်။
ထိုအချိန်တွင်ရှီအာများကိုအံ့အားသင့်စေသောအရာသည်ရှေ့ဆောင် ဆရာသည် လုံးဝ၊بسم الله الرحمن الرحيمကိုစူရာဟ်ဟမ်ဒ်အစ၌မဖတ်ချေ။(သို့)တိုးတိုးလေး(သို့)ဖုန်းကွယ်ပြီး၊ဖတ်လေ၏။ရုတ်စွအဆုံးအသံထုတ်ဖတ်ရမည်နမာဇ်(ဥပမာ)မဂရစ်၊အေရှာ၊ဖဂျရ်၌ပင်အသံမထုတ်ချေ။
بسم الله الرحمن الرحيم သည်ပထမဦးဆုံးအာယတ်အဖြစ်ဖေါ်ပြထားပေးသည်။
၁။အေမာမ်ရှာဖေအီးနှင့်၎င်းနောက်လိုက်များသည်ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်စူရာဟ်ဟမ်ဒ်၏အစဖြစ်ပြီး၊နမာဇ်၌ဖတ်ကိုဖတ်ရပေမည်။အကယ်၍နမာဇ်ကိုဇဟိုရ်နှင့်အစဲရ် ဖြစ်ပါက တိုးတိုးဖတ်ရမည်။ နမာဇ်(ဖဂျရ်၊မဂရစ်၊အေရှာ)၌ အသံကိုထုတ်၍ ဖတ်ရမည်ဟုခံယူထားပေသည်။
အေမာမ်မာလစ်ခ်၊အဘူဟနီးဖာတို့၏နောက်လိုက်များသည်ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်စူရာဟ်ဟမ်ဒ်နှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ကြောင်း၊စူရာဟ်နမ်မလ်၌ပါသော(ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်)သာလျှင်အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုထားပါသည်။အဘူဟနီးဖာ၏နောက်လိုက်များသည်နမာဇ်တစ်ယောက်ထဲဖတ်နေချိန်၌ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်ကိုတိုးတိုးဖတ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊သို့သော်ရှာဖေအီးများအနေဖြင့် ဟန်ဘဲလ်လီ များအနေဖြင့်ဗစ်မေလ်လ္လာဟ်သည်စူရာဟ်ဖွာသေဟာ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ နမာဇ်တိုင်း၌ဖတ်ကိုဖတ်ရပေမည်။
အေမာမ်ရှာဖေအီးအနေဖြင့်လည်းမိမိကျမ်း“ الامّ” ၌ဝါဟပ်ဗင်ကီးဆန်မှတဆင့်တင်ပြသည်မှာ-
الصلاة قد غيّرت حتى(الله عليه وآله صلى ) كلّ سنن رسول الله
ဟဒီးစ်တော်၁။ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)ဆီမှဟဒီးစ်တော်(၁)ပိုဒ်ကိုတင်ပြပါမည်။ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏မြင့်မြတ်မှုကိုမွတ်စလင်တိုင်းသိပေသည်။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်အတူခရီး၌ဖြစ်စေ၊အိမ်၌ဖြစ်စေ တမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ) ဘေး၌ဘယ်သူရှိရှိ၊မရှိရှိအချိန်အခါတိုင်းအတူရှိတော်မူသော သာဝကကြီးဖြစ်ပေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် بسم الله الرحمن الرحيم အားအသံထုတ်၍စူရာဟ်နှစ်ခု(စူရာဟ်ဟမ်ဒ်နှင့်အခြားစူရာဟ်)အားဖတ်ရွတ်တော်မူခဲ့
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည် بسم الله الرحمن الرحيمအားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်တော်မူခဲ့သည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်နမာဇ်၌بسم الله الرحمن الرحيمအားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်တော်မူခဲ့သည်။
၁။الكبرى السنن၂။مستدرك حاكم၃။سنن دارقطنى၌ပါရှိပေသည်။
ဂျီးဘရေအီးလ်(အ.စ)သည်ကအ်ဗာကျောင်းတော်အနီး၌ရှေ့ဆောင်ဝတ်ပြုမှုတာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန်တွင်بسم الله الرحمن الرحيمကိုအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခဲ့လေသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်အချက်ကبسم الله الرحمن الرحيمကိုအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ရမည်ဟုပါရှိသောဟဒီးစ်တော်များကိုစွန်နီအကျော်အမော်ပညာရှင်များကတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊၎င်းတို့အနက်အချို့ပညာရှင်များသည်သာဓကအားဖြင့်ဟာကင်မ်သည်မိမိ၏ကျမ်းمستدرك၌ဟဒီးစ်တော်များ၏အောက်တွင်ဤဟဒီးစ်တော်များခိုင်လုံမှန်ကန်ပါသည်ဟုရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာ၌ဆက်လက်၍တင်ပြရန်အရေးကြီးသောအချက်သည်ကား-အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)၏ဟဒီးစ်တော်များကိုရေးသားထားသော၊အကိုးအကား ကျမ်းများအားလုံး၌بسم الله الرحمن الرحيمအားစူရာဟ်ဟမ်ဒ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ခံယူထားပြီး၊بسم اللهအားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ရမည်ဆိုထားသောဟဒီးစ်တော်အားလုံးသည်“မိုသာဝါသေ”(စဉ်ဆက်မပြတ်စစ်မှန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ကျွန်တော်ထံရောက်ရှိလာသောစစ်မှန်သောဟဒီးစ်တော်) များဖြစ်ပေသည်။
ပိုမို၍အကျယ်တဝင့်လေ့လာနိုင်ရန်၊ဝဆာအေလေရှီအာကျမ်း ابواب قرائت ခေါင်းစဉ်ဖြင့်အခန်း(၁၁/၁၂/၂၁/၂၂)၌လေ့လာနိုင်ပေသည်။အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)မှတဆင့်ပါရှိသောမြောက်များစွာသောဟဒီးစ်တော်များကို“ကာဖီ”ကျမ်း၊“အခ်ဗာရွလ်ရေဇ်(အ.စ)”ကျမ်း“မွတ်စ်သဒါရက်ခ်ကိုလ်ဝဆာအေ” ကျမ်းابواب قرائتခေါင်းစဉ်အောက်၌လေ့လာနိုင်ပေသည်။
بسم الله الرحمن الرحيمအားစူရာဟ်ဟမ်ဒ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်မသတ်မှတ်ဘဲ၊ အသံထုတ်၍ ဖတ်ရွတ် ခြင်းကိုလည်းတားမြစ်ထားသောရီဝါယတ်များဖြစ်ပါသည်။အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်ရစူလေခိုဒါ၊အဘူဘာကဲရ်၊အိုမာရ်၊အွတ်စ်မန်းတို့၏နောက်၌နမာဇ်ဝတ်ပြုခဲ့ရာ၊၎င်းတို့အနေဖြင့် بسم اللهဖတ်ရွတ်သံကိုတစ်ခါမျှမကြားဘူးချေ။
အံ့အားသင့်စရာအချက်သည်ကား-အနက်စ်အနေဖြင့်بسم اللهအားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခဲ့သည်ဆိုသောဟဒီးစ်တော်၌တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)သည်ခလီဖွာ(၃)ဦးနှင့်မောင်လာအလီ(အ.စ)တို့၏နောက်၌နမာဇ်ဝတ်ပြုခဲ့ရာبسم اللهအားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခဲ့သည်ဆိုပြီး၊ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်အခြားဟဒီးစ်တော်၌တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)နှင့်ခလီဖွာ(၃)ဦးနောက်၌နမာဇ်ဝတ်ပြုခဲ့ရာ၎င်းတို့သည်بسم اللهအားအသံထုတ်၍မဖတ်ရွတ်ခဲ့ကြောင်းဆိုထားလေ၏။
ပထမဟဒီးစ်(အသံထုတ်၍بسم اللهဖတ်ရွတ်ခဲ့ကြောင်း)ကိုပယ်ဖျက်ရန်ဒုတိယဟဒီးစ်အားလုပ်ကြံရေးသားထားပေသည်။(ရှေ့၌ဖေါ်ပြပါမည်။)ပြီးနောက်အနက်စ်ဟုအမည်တပ်ပေးထားသည်။ဤအတွက်ကြောင့်အသံထုတ်မဖတ်ရဆိုသောဒုတိယဟဒီးစ်၌ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏အမည်ကိုမထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။အကယ်၍ထည့်လိုက်ပါကဟဇရတ်(သ)အလီ (အ.စ) သည်အသံထုတ်၍بسم اللهဖတ်ရွတ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး၊ နေရာတိုင်း၌ မောင်လာအလီ(အ.စ)အားအချစ်ထားသူများရှိနေသဖြင့်သိက္ခာကျခံရခြင်း၊အဖြစ်ရောက်အောင်ရှောင်ထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ဟဒီးစ်တော်၂။အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်မဂ်ဖေလ်ထံမှဆင့်ပြန်ချက်ကိုစိုနန်ဘိုင်ဟကီး၌ပြောပြထားသည်မှာ-
ကျွန်တော်နမာဇ်၌အသံထုတ်၍بسم اللهဖတ်ရွတ်ခဲ့ရာကျွန်တော်အဖေကြားသွားသည့်အခါပြောလေ၏။ပေဒ်အတ်လုပ်နေရသလား? ငါအနေဖြင့် ရစူလ်ခိုဒါ(ဆွ)၊အဘူဘာကဲရ်၊အိုမာရ်၊အွတ်စ်မန်းတို့၏နောက်၌နမာဇ်ဝတ်ပြုခဲ့ရာ၊بسم اللهဖတ်ရွတ်သံကိုတစ်ခါမျှမကြားဘူးချေ။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်بسم اللهအားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ချိန်၌မိုရှာရေက်များအနေဖြင့်ပြောင်လှောင်ခဲ့ကြသည်။အကြောင်းသည်ကား- يمامه၌مسيلمهအမည်မှာ«رحمان»ဖြစ်ပေ၏။၎င်းတို့အနေဖြင့်ပြောကြသည်မှာ- မိုဟမ္မဒ်(ဆွ)ပြောသော رحمانသည်يمامهကအလ္လာဟ်ဖြစ်သည်ဆိုကြသဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ရန်بسم اللهအားအသံဖထုတ်၍မဖတ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့လေ၏။
ပထမအချက်-«رحمن»စကားလုံးသည် بسم الله الرحمن الرحيم၌သာတွင်ပါဝင်သည်မဟုတ်ချေ။ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အတွင်း(၅၆)ကြိမ် ပါဝင်ပေသည်။စူရာဟ်မရ်ရမ်(အ.စ)အတွင်း၌ပင်(၁၉)ကြိမ်ပါရှိပေသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍စူရာဟ်များကိုလည်းမဖတ်ရွတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဖတ်ရွတ်ပါကမိုရှာရေက်များသည်ပြောင်လှောင်ကြမည်ဖြစ်ပေသည်။
ဒုတိယအချက်-မက္ကာမြို့ရှိမိုရှာရေက်များသည် بسم الله الرحمن الرحيمအား ပြောင်လှောင်သရော်ခဲ့ကြခြင်းမဟုတ်ပေ၊ကုရ်အာန်တစ်အုပ်လုံးကိုသည်။ပြောင်လှောင်သရော်ခဲ့ကြပေသည်။ဤအတွက်ကြောင့်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌ နေရာအမြောက်အများပါရှိပေသည်။သာဓကအားဖြင့်စူရာဟ်နေအာယတ်တော်၁၄၀တွင်ပါရှိသည်မှာ-
တတိယအချက်။ ။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်«رحمن»ဆိုသည်စကားကိုဝှက်ဖို့(သို့)တိုးတိုးဖတ်ဖို့အမိန့်ပေးရသည့်အထိဖြစ်လောက်အောင် مسيلمهဆိုသည်မှာဘယ်သူနည်း?၎င်းအပြင်مسيلمهဖိတ်ခေါ်မှု သည်ဟီဂျရီ၁၀ခုနှစ်မှဖြစ်လာပြီး ထိုအချိန်၌ အစ္စလာမ်သာသနာသည်အား အကောင်းဆုံးဖြစ်နေပြီးဖြစ်ပေသည်။
بسم الله الرحمن الرحيمအားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခြင်းသည်အာရပ်တောသားများ ဓလေ့စရိုက်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
အခြားဟဒီးစ်တော်၌အလီဗင်ဇိုက်ဗင်ဂျန်အန်ပြောကြားသည်မှာ-အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်အဘာစ်၊အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်အိုမာရ်၊အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်ဇိုက်တို့ (၃)ဦးလုံးبسم الله الرحمن الرحيمအားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခဲ့ကြပေသည်။
၎င်းအပြင်ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)သည်بسم الله الرحمن الرحيمအားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခြင်းသည်ကိုယ်တော်၏ဓလေ့အကျင့်ဖြစ်ကြောင်းကျော်ကြားသောစွန်နီ၊ရှီအာစာအုပ်များ၌ပါရှိပေသည်။ဤအချက်ကိုကြည့်ပြီးဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အားတောသားဟုဆိုနိုင်ပါသလား? မောင်လာအလီ(အ.စ)သည်တောသားမဟုတ်ကြောင်းသမိုင်းလေ့လာသူတိုင်းသိနိုင်ပေသည်။(ဘာသာပြန်ဆိုသူ) ဤကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ဘက်ဟဒီးစ်တော်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်နောက်ကွယ်၌ထိုခေတ်ကာလကအာဏာရှင်များနိုင်ငံရေးမကစားထားပါသလော?
မှန်ကြပေသည်။အမှန်တရားသည်ကား- ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ) သည်အသံထုတ်၍بسم اللهဖတ်ရွတ်လေ့ရှိပေသည်။ထို့အတွက်ကြောင့်မအ်ဝေယာ(လ.န)သည်မောင်လာအလီ(အ.စ)ရှဟာဒသ်ဖြစ်ပြီးနောက်နှင့်အေမာမ်ဟစန်မိုဂ်ျသမာ(အ.စ)၏တိုတောင်းလှသောအုပ်ချုပ်ရေးကာလပြီးနောက်နန်း(မတရား)တက်ပြီးဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏စွန္နတ်တော်မှန်သမျှကိုဖျောက်ဖျက်ရန်အဓိဌာန်ကာကမ္ဘာအစ္စလာမ်နေရာများမှပျောက်ပျက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပေသည်။
ဤအကြောင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး ဟာကင်မ်အနေဖြင့်စိတ်ချရသောမွတ်စ်သရက်၌အနက်စ်ဗင်မာလစ်ခ်၏ဟဒီးစ်တော်ကိုရေးသားထားပေသည်။မအ်ဝေယာသည်မဒီနာမြို့သို့ရောက်လာပြီးနမာဇ်ဂျဟ်ရီ(အသံထွက်၍ဖတ်ရသောနမာဇ်(ဖဂျရ်၊မဂရစ်၊အေရှာ)ကိုبسم الله الرحمن الرحيمအား ပထမစူရာဟ်ဟမ်ဒ်၌ဖတ်ပြီးနောက်အခြားစူရာဟ်များတွင်မဖတ်ချေ။နမာဇ်ပြီးနောက်မိုဟဂျေနှင့်အန်ဆာမှအုပ်စုတစ်စု(အသက်အန္တရာယ်ကြောင့်နမာဇ်လာဖတ်သူများဖြစ်နိုင်ပေသည်)သည်အရပ်မျက်နှာအဖက်ဖက်မှဆူပူကြပြီးပြောကြားသည်မှာ-
ပထမ။။စူရာဟ်များကွဲပေးရန်အတွက်ဟုဆိုလျှင်မမှန်ပေ။အကြောင်းသည်ကားလက်ရှိကုရ်အာန်တစ်အုပ်လုံး၌ بسم الله ကိုပါအာယတ်နံပါတ်အဖြစ်တပ်ထားပြီးစူရာဟ်ဟမ်ဒ်၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
ဒုတိယစူရာဟ်၉ဗရာသ်အားအဘယ်ကြောင့် بسم اللهဖြင့်မခြားထားပါသလော?အကယ်၍بسم اللهစူရာဟ်ဗရာသ်၌မထားခြင်းသည်ရှေ့စူရာဟ်အန်ဖာလ်ဆက်နွယ်မှုရှိအောင်ဟုဆိုလိုမည်ဆိုလျှင်စူရာဟ်အန်ဖာလ်၏နောက်ဆုံးအာယတ်တော်၌စူရာဟ်ဗရာသ်၏ပထမအာယတ်တော်အကြားအကြောင်းအရာခြင်းမတူနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ထို့အပြင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အတွင်းနှင့်စူရာဟ်များတစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆက်နွယ်နေသောလည်းကြားမှ بسم الله က ခြားထားကြောင်းတွေ့ရပေသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍အပြစ်ဒဏ်နှင့်رحمان و رحيمသည်မအပ်စပ်သောကြောင့် بسم اللهမထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။( رحمانသည်အများအတွက်ဖြစ်ပြီး၊رحيمသည်အထူးသီးသန့်ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဖြစ်ပေသည်။)
၁။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်စူရာဟ်ဟမ်ဒ်နှင့်အခြားစူရာဟ်များ၏အစ၌بسم اللهကိုဖတ်ရွတ်ခဲ့ပေသည်။(တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏အနီးစပ်ဆုံးသာဝကတော်များသည်ဟဒီးစ်တော်များကိုဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပေသည်။)အချို့ဟဒီးစ်တော်များအရတမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်بسم اللهအားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပေသည်။
၂။بسم اللهအားကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်ဟုဆိုထားသောရီဝါယတ်တော်များပါရှိပြီး၊တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်بسم اللهအားတိုးတိုးလေးဖတ်ခဲ့ကြောင်းပြဆိုနေသောဟဒီးစ်များ၌လုပ်ကြံထားသောဟဒီးစ်အတုများဖြစ်ကြောင်းအရိပ်အမြွက်ပါဝင်နေပေသည်။ဤအလုပ်ကိုဘနီအိုမိုင်ယာအနေဖြင့်တိတ်တဆိတ်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်။
အထောက်အထားသည်ကား-လူထုအကြားဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ) သည်بسم اللهအားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခဲ့ကြောင်းကျော်ကြားရာ၊ပြီးနောက်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ထံမှသင်ကြားထားသောဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ) ၏စွန္နတ်တော်များကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ပေသည်။
အာလေမိုဟမ္မဒ်ကိုအားလုံး၏အမြင်သည်ကား- بسم الله အားအသံထုတ်၍ဖတ်ရွတ်ခြင်းကိုအသံကျယ်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေသည်။
ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အနေဖြင့်بسم اللهအားအသံထုတ်၍ဖတ်လေ့ရှိ၏။ဘနီအိုမိုင်ယာအာဏာရလာသောအခါဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏စွန္နတ်တော်များကိုအစပျောက်စေရန်အလို့ငှာبسم اللهကိုအသံထုတ်မဖတ်ဖို့တားမြစ်ခဲ့ပေသည်။
“သို့သော်ဟဇရတ်(သ)အလီအဘီသွာလစ်(ပ)(အ.စ)သည်بسم اللهအားအသံထုတ်၍ဖတ်ခဲ့ကြောင်း“စဝါသိုရ်”ဟဒီးစ်စစ်မှန်ကြောင်း၊စစ်မှန်သောရဝီးတစ်ဦးမှတစ်ဦးကျွန်ုပ်တို့ခေတ်အထိရောက်လာခြင်းသည်သေချာပေသည်။မည်သူမဆိုမိမိဘာသာ၊သာသနာ၌ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏နောက်လိုက်ပါက၊လမ်းမှန်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပေသည်။အကြောင်းသည်ကား-တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကိုယ်တိုင်အို!အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဟက်(အမှန်တရား)အားဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)ရှိရာဘက်သို့လှည့်ပေးတော်မူပါဟု” ဒိုအာတောင်းခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
سفينة البحار، مادّه سجود
 سوره رعد، آيه 15
 وسائل الشيعه، جلد 4، صفحه 984
 مسند احمد، جلد 3، صفحه 327 و سنن بيهقى، جلد 1، صفحه 239
 علل الشرايع، جلد 2، صفحه 341
 در كتب بسيار ديگرى )صحيح بخارى، جلد 1، صفحه 91 و سنن بيهقى، جلد 2، صفحه 433
(اين حديث نقل شده است نيز
 مجمع الزوائد، جلد 2، صفحه 126
 مصنف ابن ابى شيبه، جلد 1، صفحه 397
 فتح البارى، جلد 1، صفحه 404
 مسند احمد، جلد 6، صفحه 331
 مسند احمد، جلد 3، صفحه 327 ; سنن بيهقى، جلد 1، صفحه 439
 السنن الكبرى بيهقى، جلد 2، صفحه 106
 طبقات الكبرى، ابن سعد، جلد 6، صفحه 53
 اخبار مكّه ازرقى، جلد 2، صفحه 151
 فتح البارى، جلد 1، صفحه 410
ဟဇ်စာ၊အဖူအမ်ရ်၊အဗ်နေကစီးရ်၊အာဆင်းမ်(အဘူဘာကဲရ်၏ရီဝါယတ်အရ) أرجلِكم ဟုဖတ်ရွတ်သရဇ္ဈာယ်ပြီးအခြားကာရီများအနေဖြင့်ယနေ့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ပါအတိုင်းأَرْجُلَكُمဟုဖတ်ရွတ်သရဇ္ဈာယ်ပါသည်။အဓိပ္ပါယ်အရမည်သို့မျှမကွဲလွဲချေ။
အကယ်၍ أرجلِكم ဟုဖတ်ပါကرؤوسكم အပေါ်عطفဖြစ်သွားသဖြင့်ရှီအာများယနေ့လုပ်နေသကဲ့သို့အဓိပ္ပါယ်ထွက်လာပေမည်။
အကယ်၍ أَرْجُلَكُم ဟုဖတ်ရွတ်ပါကرؤوسكم အပေါ် عطف လုပ်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးوَامْسَحُوا ၏ကံပုဒ်ဖြစ်ပြီးဝိုဇူ၌ဦးခေါင်းနှင့်ခြေမျက်စိအထိ“မဆာ”ပြုလုပ်ပါဟုအဓိပ္ပါယ်ထွက်ချေမည်။
သို့သော်အချို့သူများအနေဖြင့် أَرْجُلَكُم ဖတ်ရွတ်ပါက- وُجُوهَكُمْအပေါ် عطفဖြစ်သွားပြီးမျက်နှာနှင့်လက်တစ်တောင်အထိဆေးကြောသကဲ့သို့ခြေမျက်စိအထိဆေးကြောပါလေဟုအဓိပ္ပါယ်ပေးသည်ဟုဆိုကြ၏။
အာရဘီသဒ္ဒါအရဆန့်ကျင်ကြောင်းသက်သေသည်ကား- معطوف နှင့် معطوف عليه အကြား၊အခြားဝါကျအသစ်မလာချေ။ဤအတွက်ကြောင့်အချို့စွန်နီအိုလမာများအနေဖြင့်ဤ
အထောက်အထားအယူအဆကိုလက်ခံခဲ့ကြပေသည်။ أَرْجُلَكُم အား وُجُوهَكُمْ အပေါ် عطف လုပ်ဖို့ဆိုသည်မှာမဖြစ်နိုင်ချေ။
ضربت زيدا و مررت بكر و عمرو
ဟုမသုံးချေ။(شرح منية المصلي ص 16 )
အချို့စွန်နီအိုလမာများအနေဖြင့်أَرْجُلَكُم အားرؤوسكم အပေါ် عطف လုပ်ထားသည်ဟုဆို၏။
 تفسير كشّاف، جلد 1، صفحه 610
 مدارك اين حديث در بحث نكاح موقّت گذشت
 المغنى ابن قدامه، جلد 1، صفحه 117
 مبسوط سرخسى، جلد 1، صفحه 98
 كافى، جلد 3، صفحه 32
 روح المعانى، جلد 6، صفحه 87
 مسند احمد، جلد 1، صفحه 124
كنزالعمّال، جلد 9، صفحه 448
 مسند احمد، جلد 1، صفحه 67
 سنن ابن ماجه، جلد 1، صفحه 156
 مسند احمد، جلد 5، صفحه 342
 صحيح مسلم، جلد 7، صفحه 120
 الفقه على المذاهب الاربعه، جلد 1، صفحه 135
 همان مدرك، صفحه 136
 تهذيب، جلد 1، حديث 1092
 من لا يحضره الفقيه، جلد 4، صفحه 415
 وسائل الشيعه، جلد 1، صفحه 279
 تفسير كبيرفخر رازى، جلد 1، صفحه 207
 السنن الكبرى، جلد 1، صفحه 269
 همان مدرك، صفحه 270
 السنن الكبرى، جلد 1، صفحه 272.
 السنن الكبرى، جلد 1، صفحه 283
 مبسوط سرخسى، جلد 1، صفحه 98.
 المغنى ابن قدامه، جلد 1، ص 521
 تفسير المنير، جلد 1، صفحه 46
 صحيح بخارى، جلد 1، صفحه 190
 الامّ، جلد 1، ص 269
 سنن دارقطنى، جلد 1، صفحه 302، همين حديث را سيوطى در كتاب درّالمنثور، جلد 1،
صفحه 22 آورده است
 مستدرك الصحيحين، جلد 1، صفحه 232
 الدرّ المنثور، جلد 1، صفحه 23
 السنن الكبرى، جلد 2، صفحه 47
 سنن دارقطنى، جلد 1، صفحه 309
 صحيح مسلم، جلد 2، باب حجّة من قال لا يجهر بالبسملة، صفحه 12
 السنن الكبرى، جلد 2، صفحه 52
 سوره حجر، آيه 95
 مصنف ابن ابى شيبه، جلد 2، صفحه 89
الدرّ المنثور، جلد 1، صفحه 21
 مستدرك الصحيحين، جلد 1، صفحه 233
مستدرك الوسائل، جلد 4، صفحه 189
 تفسير كبير فخر رازى، جلد 1، صفحه 206
 همان مدرك، صفحه 204-205